Kamshaawwan mul'isuu fi dhoksuu baafata xiqqaa bana. Kamshaan dirqalee fi sajoowwan qabate hatattamaan ajajawwan LibreOffice si'if dhiheessa.
Fuulaa irraa iddoo daangaalee maxxanfamu agarsiisa yk dhoksa. Sarari daangaa hin maxxanfamu.
Keewwatoota dhokatoo agarisisa yk dhoksa. Filaannoon kun agarsiisa argii keewwatoota dhokatoo qofa irratti malee maxxansa keewwatoota dhokatoo irratti dhiibbaa hinqabaatu.
Title is: Mul'annoo